August, 2019 | Job Vacancy in Myanmar
2019-08-30 13:31:52 , ဒီလို​နေ့တိုင်း signal ​တွေထိ…
ဒီလို​နေ့တိုင်း signal ​တွေထိပြီး profit ​တွေရချင်​​တော့ CMX Advisor Teamနဲ့ join ဖို့​တော့လိုမယ်​​နော်​
CMX Advisor Team ရဲ့ signal ​တွေဟာ 90% အထက်​မှာပဲရှိပါတယ်​
This entry was posted in Training and Class on 2019-08-30 by admin.
2019-08-23 12:06:53 , Discount =အထူးအခွင့်ရေးလေး လာ…
? Discount =အထူးအခွင့်ရေးလေး လာပါပြီခင်ဗျာ ?
ကိုယ်တက်ချင်တဲ့ ဘာသာလေးကို ယခု post အောက်မှာ comment ပေးပြီး ဝါသနာတူ သူငယ်ချင်းသုံးယောက်ကို mention ခေါ်ပေးရုံဘဲနော် ပြီးရင်တော့ page messenger မှာ ကိုယ်ပေးထားတဲ့ commentလေးကို Screenshot လေးရိုက်ပြီး ဦးဆုံးပို့ပေး သူ ၁၀ ဦးကို 20% ကင်းလွတ်ခွင့် ✊✊✊
ပညာပါရမီမှာ အနာဂတ်အတွက် အကြိုးပြုမယ့် လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်တွေထဲမှာ နေရာကောင်းတစ်ခုပေးနိုင်တဲ့ သင်တန်းတွေတက်ပြီး အလုပ်ကိုင်အခွင့်လမ်းတွေ အရယူဖို့အချိန်ကြရောက်လာပါပြီနော် ???
September-1 ရက်နေ့ Saturday, Sunday ရုံးပိတ် ကျောင်းပိတ်ရက်အတန်းလေးတွေတက်ပြီး International Certificates နဲ့ Management7ဘာသာတက်ပြီး USA Diploma အရယူရအောင်???
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ☎ 09797531818
သို့ ဆက်သွယ်မြေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဖုန်းဘေကုန်မှာစိုးရင် misscall လေးဘဲထိုးခဲ့နော်ပြန်လည်ဆက်သွယ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ ???
This entry was posted in Training and Class on 2019-08-23 by admin.
စာရင်းပညာနဲ့ပတ်​သက်​သမျှ sharing လုပ်​​ပေးမယ့်​Group
This entry was posted in Training and Class on 2019-08-20 by admin.
2019-08-15 08:30:13 , Please admin LCCI level1+2 နှ…
This entry was posted in Training and Class on 2019-08-15 by admin.
2019-08-11 17:03:49 , Please admin LCCI level1+2 (F…
LCCI level1+2 (For December series UK)နှင့်​ Accounting Trainning
Sunday only( section E)
This entry was posted in Training and Class on 2019-08-11 by admin.
2019-08-07 08:37:51 , Please admin LCCI level1+2 (F…
This entry was posted in Training and Class on 2019-08-07 by admin.